That's so good, right?: December 2012
Neo: ချစ် အိပ်ယာကိုလာတော့မှာလား ဒါမှမဟုတ် အဲဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပဲတစ်ညလုံးအလုပ်ရှုပ်နေတော့မှာလားပြော?
Me: အခု..ချစ်လာနေပြီ ဟုတ်ပြီလား သဲတုံးလေး။
Neo: ဒီည ချစ်စိတ်ထဲမှာ ဟိုစိတ်ဒီစိတ်လေးရှိနေလား…ဟင်?
Me: ချစ်က ဘယ်အချိန်မှာလဲ???
Neo: ဟူး….အဲဒီလိုဖြစ်တာနည်းပေမဲ့…သဲစိတ်ထဲ အခုရှိနေတယ်ကွာ….
Me: ဘာလို့လဲ? ဘာညာလုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်နေတယ် အခု…ဟိ?
Neo: သဲ သိပ်တော့မသေချာဘူး။ ချစ်?
Me: ကြည့် သဲမေးတော့မှ အဲ့စိတ်တွေ ချစ်မှာ သောင်းကြမ်းလာပြီနော်။
Me: - စိတ်ကောက်တယ်ကွာ -
Neo: Alright …ကောင်းပြီ။ သဲမေးတဲ့မေးခွန်းကို အခုမှန်အောင်ဖြေနိုင်ရင် သဲကို -ိုးခွင့်ပေးမယ်ကွာ ဟီး ဟီး။
Me: ဘယ်လို? စကားထာဝှက်သလိုမျိုးလား?
Neo: ကဲ ဖြေချင်သလား ဒါမှမဟုတ် မဖြေချင်ဘူးလား?
Me: ဟုတ်ပါပြီ။ မေးခွန်းကဘာလဲ?
Neo: သဲက…ဟုတ်တယ် သဲက အိပ်ယာထဲမှာဘာလေးတွေလုပ်ရတာကြိုက်လဲ?
Me: ရှင်းရှင်းလေးပါ….ညညဆို ချစ်ခြုံထားတဲ့ဂွမ်းစောင်ကို ဆွဲခြုံပြီး ချစ်ချမ်းနေအောင်လုပ်တာလေ?
Neo: ဟေး…အဲဒီ့ကိစ္စအတွက် မနက်တုန်းက တောင်းပန်ပြီးပြီလေကွာ။ မေးမဲ့မေးခွန်းကို စိတ်မ၀င်စားဘူးဆိုရင်လဲ သဲကို-ိုးရမယ့် ကိစ္စ ကိုလည်း မေ့ပစ်လိုက်တော့။
Me: ကောင်းပြီ…ကောင်းပြီ…ကောင်းပါပြီဗျာ….အမ်း….သဲက….မလုပ်မဖြစ် လုပ်ဖို့ကြိုက်တတ်တဲ့အရာလေးတွေရှိတယ် ချစ်စဉ်းစား လိုက်ဦးမယ်ကွာ…နော်။
Neo: ပိုပြီး တိတိကျကျစဉ်းစားနော် ဒါပဲ။
Me: သဲရဲ့ -ီးကိုစုပ်နေတုန်း ထိပ်အရေပြားလေးကို လျှာနဲ့ထိုးထိုးပြီးကလိခံရတာကိုလည်းကြိုက်တယ်။
Me: အထူးသဖြင့် -ီးတစ်ချောင်းလုံးကို ချစ်က လျှာကျွေး…လျှာနဲ့ကစားပေးတာကိုလည်းကြိုက်တယ် ဟုတ်?
Me: ဒါပေမယ့်….သဲရဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ကလိတဲ့အခါဆိုရင် လုံးဝမနေနိုင်ဘူး ယားယံတာကိုလေ…
Neo: ဟုတ်တယ် အမြဲပဲ…
Me: ဟား..ဟား နို့သီးခေါင်းလေးကို လျှာနဲ့ဖွဖွလေးကလိ…..ကလိရင်း ခပ်နာနာလေးသွားနဲ့ကြိတ်လိုက်ရင် သဲငပဲက မတ်မတ်လာတာ လေ..ကြိုက်နေပါတယ်…ဟီး။
Me: မှန်တာတစ်ခုကို ချစ် ခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့တယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်?
Me: ဟာကွာ…ဟိုဟာလုပ်ဖို့အရေး ခက်နေတုန်းပဲ
Neo: စခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်၊ ပြီးတော့ ဆက်ပြီးမှန်းဆပေါ့
Me: ဟူး….နောက်ကျောဘက်ကို ပွတ်သက်ကုတ်ခြစ်တာကို သဲကကြိုက်သေးတယ်။
Me: နောက်တော့…သဲ တင်ပါးတွေကိုဆွဲညှစ်ပြီး နီရဲတဲ့အမှတ်သင်္ကေတတွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်
Neo: ဟား…ဟား ဟား Yeah…
Me: နောက်တစ်ခါ သဲရဲ့ ချိုင်းတွေကို ချစ်က လျာနဲ့လျက်တဲ့အချိန်…
Neo: ကောင်းပါတယ်….တော်တော်နီးနီစပ်စပ်တွေးနိုင်လာပြီ….အဲ့ဖီလင်လေးက အခုထိ hot နေတုန်းနော်..ဟီး
Me: အမှန်ပဲလေ…..သဲ ပက်လက်လှန်လိုက်တော့ ချစ်ကပေါင်ပေါ်ခွထိုင် သဲရဲ့ငပဲကိုအားရပါးရကိုင်ပြီး -ွင်းတိုက်ပေးတာလေ
Neo: သဲတို့ အဲလိုမကြာခဏလုပ်ကြရမှာပဲဟာ….
Me: ချစ်က အဖြေမှန်ကိုမမှန်းဆနိုင်သေးဘူးလား?
Neo: ချစ်ဖြေတာမှန်တဲ့အခါ သဲပြောပြပါ့မယ်..
Me: Shit, ချစ်တို့ တစ်ညလုံးလိုလိုဒီမှာနေကြမှာနော်
Neo: အဲတာဆို မြန်မြန်စဉ်းစားကြည့် တွေးကြည့်လေ
Me: ဒီနေရာတော့ ဂျောင်ပိတ်မေးတာ သိသာလွန်းတယ်ကွာ…
Me: သဲက ချစ်ကို လိုးရတာကြိုက်တယ်၊ rimming လုပ်ပေးရတာကြိုက်တယ်၊ ချစ်-ီးကို စုပ်ပေးရတာကြိုက်တယ် ပြီးတော့ အားလုံးလို လိုပဲလေ။ အဲ့လိုပဲလေ….
Me: ဒါဆို အဲတာပဲပေါ့နော်?
Me: အာ…..သဲက ချစ်ကို-ိုးပြီးလို့ ကွန်ဒုံးကိုချွတ်ပြီးပြီးခြင်း သုက်ရေတွေပေနေသေးတဲ့ ငပဲကို ချစ်က လျှာနဲ့လျက်ပေးတာကိုလည်း ကြိုက်သေးတယ်လေ။
Me: ပြီးတော့ အလုပ်မသွားခင် သဲနဲ့အတူတူ ချစ်ရေချိုးတယ်လေ…..
Me: ချစ်ငပဲကိုဖဲကြိုးနဲ့ရစ်ပတ်စီးနှောင် ပြီးတော့ သဲမွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်ဆိုပြီး ပြခဲ့တုန်းက သဲအရမ်းရယ်ခဲ့တာကော
Neo: Oh my God!! ရယ်ရလွန်းလို့ နှစ်ရက်လောင်တောင် ဗိုက်ကြွက်သားတွေနာနေခဲ့ရတာလေ ဟီးဟီး
Me: သဲပေါင်ခွဆုံကို ချစ်က နှာခေါင်းနဲ့ဖိကပ်ပွတ်သပ်ပေးတာကိုလည်း အရမ်းကြိုက်တယ်မဟုတ်လားလို့
Me: နောက်တစ်ခါ သဲ ရွှေဥတွေကို လျာနဲ့တစ်လုံးခြင်းဝိုက်ဝိုက်ပြီးလျက်တဲ့အချိန်…
Neo: Always sexy.
Me: ချစ်ရဲ့အဖြေက နီးစပ်လာပြီးလား?
Neo: ချစ်က လိင်ကိစ္စပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုနှစ်ပြီးမလုပ်ဘူး မကြံစည်ဘူးဆိုတာ ထင်ရှားနေတာပဲကွာ…
Me: ဒါဆို…တော်ပြီကွာ ပြီးပြီ မဖြေတော့ဘူး။ ချစ် top နောက်တစ်ခါလုပ်ဖို့စောင့်နိုင်ပါတယ်….ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သဲစိတ်ပါရင် ချစ်နဲ့ -ိုးနိုင်တယ် ဟုတ်ပြီလား..ဟွန်း
Neo: အော်….ကြိုးစားဖြေနေတာလေးကိုပဲ သဲကချစ်နေတာ…ဟိ
Me: သဲကိုလည်း ချစ်က အရမ်းချစ်ပါတယ်ဗျာ
Neo: အခုအဖြေက တော်တော်နီးစပ်လာပြီကွ..
Neo: လုပ်စမ်းပါ…..အဖြေက လုံးဝကိုမှန်တော့မှာ ကြိုးစားစမ်းပါ ချစ်ရ
Me: သဲ အကြိုက်ဆုံးအရာက ချစ်က သဲကို ချစ်တယ်လို့ပြောတာလေးပေါ့၊ ဟုတ်တယ်ဟုတ်??
Me: သဲကကွာ မဟုတ်တာလေးကိုပြောဖို့ ကပ်စေးကုတ်ရသေးတယ်…ဟင်း..
Neo: သဲက အဲဒါကို ဘယ်နေရာက သင်ယူခဲ့ရတယ်လို့ ချစ်ထင်လဲ..ပြော??
Alex Aung (24 Dec 2012)
Posted by Alex Aung at 12:21 PM 1 comment: